Farmaajo oo Ka Hadlay Dhibaatada Ka Dhalatay Daadadka Ku Fatahay Qardho - Horseed Media • Somali News
Farmaajo oo Ka Hadlay Dhibaatada Ka Dhalatay Daadadka Ku Fatahay Qardho
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka tacsiyeeyay musiibada naf iyo maalba leh ee ka dhalatay daadadkii ku fatahay magaalada Qardho ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago shacab iyo dowladba u gurmadka dadkeenna ay soo gaartay dhibaatada xooggan.
Samir alle says
Waxaan aad ula socday wararkii aad ka qorayseen Daadadkii Qardho.
Waxaa haboon marka aad wararka qoraysaan inaad warkiina laga dhadhansan qofka qofaya aragtidiisa uu qabo. Wariyanimadu su hufan ayey u tebiyaan.
Tusaale haddaan ku siiyo waxaan arkay
Madaxweynihii Soomaaliya waa idinku adkaatay inaad xilkiisa sheegto, taas bedelkeeda naanaystiisii ayaad tiri Farmaajo.
Halka aad Madaxweynaha deegaanka aad ciwaan ilaa warbixinta dhexdeeda aad 10 times ku sheegtay xilkiisa iyo magiciisa! waxaan kaloo la yaabay deeqdii dawladda Soomaiya iyo gurmadkii ay fidisay ahmiyad ma aydan siinin iyo guddiyadii ay qabatay ee dadka loogu gurmanayey.
Marka awal waxaan u qabay in horseedmedia yahay website hufan oo dad xirfad lihi qoraan laakiin maanta waxaan ka bartay in bahalku xaafad hoose ka ciyaaro.